Madaxweynaha Jubbaland oo soo xiray kulan wadareedka dardar galinta hiigsiga Xukuumadda “SAWIRRO” | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Madaxweynaha Jubbaland oo soo xiray kulan wadareedka dardar galinta hiigsiga Xukuumadda “SAWIRRO”
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam, ayaa maanta soo xiray kulan wadareedka dardar galinta hiigsiga Xukuumadad oo socday muddo sadex maalmood ah.
Kulankan oo ahaa mid golaha Xukuumaddu ay ku qaadaa dhigayeen hiigsiga Xukuumadda iyo qorshayaasha Dowladda ayaa waxaa lagu jaangooyay in isbadal muuqda lagu sameeyo shaqooyinka iyo howlaha ay hormuudka ka yihiin Wasaaradaha kala duwan ee Jubbaland.
Madaxweynaha Jubbaland oo kulanka soo xiray ayaa tilmaamay in loo baahan yahay dhamaan qorshayaasha halkan lagu gaaray in si dardar leh loogu badalo shaqooyin joogto ah oo lagu bari taaro shaqada ay hayaan Wasaaradaha kala duwan, isagoo intaas ku daray in muhiimada kulankan ay tahay in wax laga badalo hanaankii hore ee Wasaaradaha ay ku shaqayn jireen, isla markana isla xisaabtan joogto ah lagu sameeyo howlaha baxaada leh ee Wasaaradaha ay qabtaan.
Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa sheegay in guddiga shaqada iyo shaqaalaha ay mas’uuliyad ka saarantahay la xisaabtanka shaqaalaha dowladda, iyadoo la hubinayo habsami u socodka shaqada iyo joogtaynta gudashada waajibaadka cid walba saaran.
Previous articleGuddoomiyaha Gobolka Bari oo la kulmay Wafdi ka socday WFP “SAWIRRO”
Next articleWasiirka Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Soomaaliya oo gaaray Jabuuti